Izindaba - Izincomo ezithembekile zokonga ugesi kanye nemikhiqizo yokuvikela imvelo
Isici se-Multi element high efficiency siyimishini yokuhlola eyenziwe ngabantu futhi ehlakaniphile edizayinwe yinkampani yethu ngokusho kwesidingo semakethe nokwenza komkhiqizo.
Ukusebenza nezici zesici se-multi element high performance.
1. Isikrini esondlayo nesidlidlizelayo sihlanganisiwe saba munye. Isiphakeli sonke sisemzimbeni wokufaka uphawu wokuphakela ekugcineni kwesikrini esidlidlizelayo, futhi umthombo wokudlidliza wokuphela kokondla ungaphandle komzimba wokuvala. Ukuxhumeka okuthambile kwenjoloba kusetshenziselwa ukuxhuma nesembozo sokubekwa uphawu, esisindisa kakhulu isikhala sokuphakama.
2. Isondli esidlidlizayo sitholakala ngaphakathi kwesikrini esidlidlizayo, esinciphisa iphuzu lokuvula uthuli. Isigaxa sesango sifakwe ngqo engxenyeni yokudla yetheku lokudlidliza, okuthuthukisa umphumela wokuvikelwa kwemvelo.
3.Isikrini sokudlidliza esihlanganisiwe, ukudlidliza kwesikrini, uhlangothi lwesikrini alibambi iqhaza kudlidliza, linciphisa ikhwalithi yokudlidliza, linciphise umthelela esisekelweni. Isikrini nokudlidliza okujabulisayo kufakwe ngezigaba, kudlidliza ngokuzimela, kulula ukuqaqa nokugcina.
4. Isikhuthazi sokudlidliza sibekwe ngaphandle kohlangothi lwesikrini, okususa kungenzeka ukuthi inani elikhulu lothuli kulula ukungena egumbini lokuthwala, futhi ukuthwala kunempilo yenkonzo ende.
5. ipuleti yokusefa yensimbi ipuleti elilodwa emaceleni amabili ngesihlungo sebha ngokusebenza kahle kokuhlola. Isikrini se-coke sisebenzisa ibha yensimbi engagqwali noma ibha ye-ceramic bar, enempilo ende yokugqoka.
6. Ukwakheka kwesikrini se-6-element high-efficiency kuvaliwe kahle futhi kunomphumela omuhle wokuvikelwa kwemvelo.
7. Isikhombisa Uhlelo lokuphakelwa luvaliwe ekugcineni kokudla kwesikrini esidlidlizayo. Okokusebenza kugeleza kusuka esangweni le-chute kuya ku-feeder, bese kuya ku-chute ekugcineni kokukhishwa kwe-shale shaker nezinto zayo ezingaphezulu, nezinto ezingaphansi kwesikrini kuya ku-hopper ne-chute. Konke ukuxhumana okunzima kuvaliwe ngaphandle kwephuzu lokuchichima uthuli, okunganciphisa ivolumu yomoya yesiqoqi sokudlidliza uthuli ngaphansi komkhombe wesithando somlilo, bese ugcine ukusetshenziswa kwamandla okususa uthuli nokugcinwa kwemishini yokuvikelwa kwemvelo ngezinga elikhulu Izindleko zempahla nomsebenzi izindleko.
8.I-multi element ukusebenza kahle kwesikrini somzimba cishe ukunakekelwa kwempilo yonke isikhathi, faka kuphela ipuleti lesikrini ne-vibrate exciter.
Isici sokusebenza kahle kakhulu se-Multi element, ukusebenza okuhle kakhulu, izindleko zokusebenza eziphansi kakhulu, ukukhetha kwakho okuhle.